मलेसियामा भा’गेर काम गरेका बिष्टको मृ’त्यु पछी श’ब ल्याउन कठिनाइ !! उतै अत्ये’ष्ठि गरियो !! हार्दिक श्रन्दांजलि - Onlines Time
August 13, 2021 onlinestimeLeaveaComment on मलेसियामा भा’गेर काम गरेका बिष्टको मृ’त्यु पछी श’ब ल्याउन कठिनाइ !! उतै अत्ये’ष्ठि गरियो !! हार्दिक श्रन्दांजलि
Voice का रबि र अफ्रिता संगै मिडियामा, किरणले डलरले जित्यो भन्नेलाई कडा जवाफ | हाम्रो दुस्मनी छैन (भिडियो हेर्नुहोस)